Asking forafavour (အကူအညီတောင်းခံခြင်း) - Myanmar Network
Asking forafavour (အကူအညီတောင်းခံခြင်း)
Posted by zar ni (My Way!) on December 29, 2012 at 11:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အကူအညီတစ်ခုခု၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကိုတောင်းဆိုတာကို ask forafavour လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအကူအညီတောင်းရတဲ့အခါရှိသလို ကိုယ့်ကိုအကူအညီတောင်းလာတာလည်းကြုံရမှာပါ။ ဒါကြောင့်အရေးကြုံလာရင်နားလည်အောင်၊ ပြောနိုင်အောင် လေ့လာကြည့်ကြပါဦး။ (မြန်မာလိုပြန်ရာမှာ အများစုကို သာမာန်အရပ်သုံးစကားနဲ့ပြန်ထားပါတယ်။)
• Could you do meafavour, please?
• Would you mind doing meafavour?
• Could I askafavour of you?
• Could you help me with this, please?
• Could you hold this for me, please?
• l was wondering whether you could. . .?
. . . များကျွန်တော့်ကိုလုပ်ပေးနိုင်မလားမသိဘူးနော်
• Do you think you could …?
. . . လုပ်ပေးနိုင်မလားမသိဘူးနော်
• Could you lend meahand with this, please?
• Have you got time to..? . . . ဖို့အချိန်ရလားဟင်
• If it's not too much trouble, could you...? အပန်းသိပ်မကြီးဘူးဆိုရင် . . . ပေးနိုင်မလား
Preparing to ask forafavour (အကူအညီတောင်းဖို့ပြင်ဆင်ခြင်း)
ကိုယ်ကအကူအညီတောင်းရာမှာကိုယ်လိုချင်တာကိုချည်းတန်းပြောလို့မဖြစ်ပါဘူး။ သူ့အခြေအနေကို တီးခေါက်ကြည့်ရပြီးမှ ပြောရတာဖြစ်လို့ စကားပုလ္လင်ခံရပါသေးတယ်။ တစ်ချို့အသုံးတွေဟာ ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းများကြားပြောကြတာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တွေရဲ့ဓလေ့စရိုက်ဖြစ်လို့ ဗမာ့နားမှာတစ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• Are you free on Friday? It's just I need someone to...
သောကြာနေ့မှာအားလားဟင်။ ငါ . . . လုပ်ဖို့တစ်ယောက်ယောက်လိုနေလို့။
• Are you busy this week? I‘ve got to finish this project and l need. ..
ဒီတစ်ပတ်အလုပ်များလားဟင်။ ဒီပရောဂျက်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရမှာ။ ငါ . . . လိုနေလို့။
• I've got to move house this week. I don't suppose you could. ..
ဒီတစ်ပတ်အိမ်ပြောင်းရမယ်။ မင်း ကူညီပေးနိုင်မလားမသိပါဘူး။
• About that favour you owe me. Could you...?
မင်းတုန်းကငါ . . . လုပ်ပေးဖူးတယ်လေ။ အခု မင်း . . . လုပ်ပေးနိုင်မလား။
• I'm not very good at this. Could you . . .?
ဒါတော့ကျွန်တော်သိပ်မကျွမ်းဘူး။ ခင်ဗျား . . . နိုင်မလား။
• I need to call in that favour I did for youawhile ago.
• You knowalot about (cars), don't you? Could you. . .?
ခင်ဗျားကားအကြောင်းတော်တော်သိတယ်မဟုတ်လား။ . . . နိုင်မလား။
• You're good at this. Could you . . .?
ဒါတော့ခင်ဗျားပိုင်ပါတယ်။ . . . မလား။
• You remember that time I . . .?
ကျွန်တော် . . . လုပ်ပေးဖူးတာမှတ်မိတယ်မလား။
• I know this might soundabit cheeky, but could you . . .?
ဒါကနည်းနည်းတော့ ရင့်သလိုများဖြစ်နေမလားပဲ။ ဒါပေမယ့် . . . နိုင်မလား။
(cheeky ကို ရိုင်းပျသော၊ ရင့်သီးသော၊ မလေးမခန့်နိုင်သော စတဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့သုံးပါတယ်။ ဗမာဆန်ဆန်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ထက်အသက်၊ ရာထူး၊ ကြီးသူတွေကို တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့ပြောရာမှာ “မရိုမသေ ကျွန်တော့်ကို စာအုပ်လေးလှမ်းပေးပါဦး” “ကန်တော့နော်။ စာအုပ်လေးတစ်ချက်လောက် . . .” ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ယူဆပါတယ်။)
• You're strong, aren't you? Could you . . . ?
မင်းကသန်တာပဲကွာ။ ဒါလေးတော့ . . . နိုင်မလား။
Thanking someone (ကျေးဇူးတင်ခြင်း)
အကူအညီရသွားရင် တစ်ဖက်သားကိုကျေးဇူးတင်စကားပြန်ပြောရပါမယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးအတုံ့အလှည့် ကူညီနိုင်မည့်စကားပြောပေးရပါမယ်။
• Thank you so much. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
• You've saved my life. မင်းကယ်ပေလို့သာပေါ့။ (တကယ်တမ်းအသက်ကယ်တာနဲ့ဆိုင်ချင်မှ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခြေအနေအပေါ်မူတည်းပြီး ပိုပိုသာသာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။)
•Thanksamillion. ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။
• You'reatrue friend. မင်းကတော့တကယ့်သူငယ်ချင်းစစ်စစ်ပဲ။
• I really owe you (one). မင်းအပေါ်ငါကျေးဇူးကြွေးတင်သွားပြီ။
• I'll buy youadrink sometime. တချိန်ချိန်ပြန်တိုက်မယ်။
• I'll return the favour sometime. ငါနောက်ကျပြန်ကူညီပေးပါ့မယ်။
• I'll do the same for you one day. တစ်နေ့တော့ မင်းကို ငါဒီလိုပြန်ကူညီပေးပါ့မယ်။
• You're an absolute life saver! မင်းကတော့လုံးဝကယ်တင်ရှင်ပါပဲ။
Agreeing to do someoneafavour (ကူညီဖို့သဘောတူခြင်း)
• OK. No problem. ရပါတယ် ကိစ္စမရှိပါဘူး။
• Yes, I could help with that. အင်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။
• Of course! ဒါပေါ့။ ရတာပေါ့။
• It would beapleasure. ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာပါပဲ။
Saying no (ဟင့်အင်းပြောခြင်း)
ကိုယ်ကမကူညီနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျတော့လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းတတ်ရပါမယ်။ ဆင်ခြေလေးတွေနဲ့ပေါ့ . . .။
• Actually, I'mabit busy this week. တကယ်တော့ ဒီတစ်ပတ်နည်းနည်းအလုပ်များနေလို့ပါ။
• I'm afraid I’ve got to go toawedding. အားနာပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားရမှာမို့ပါ။
• I'm sorry but I can't because... ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မ . . . နိုင်ပါဘူး။
• I'm not available on Wednesday. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မအားဘူးဗျ။
• No, I don't think so. ဟင့်အင်း။ ငါတော့မထင်ဘူး။
• I'd like to be able to help you but. .. ကူညီချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် . . .
• When was the last time you ever did anything for me? မင်းဘယ်တုန်းကငါ့ကိုများတစ်ခုခုလုပ်ပေးခဲ့ဖူးလို့လဲ။
• No! မရဘူး
• No way! လုံးဝဘဲ
အောက်က dialogue လေးနဲ့တွဲလေ့လာကြည့်ပါဦး။
Joe is sitting onapark bench when he sees his friend Tara.
I: Ah, Tara! Just the person I wanted to see!
T: Oh, hi, Joe.
J: Are you free on Saturday?
T: Erm, why?
J: Would you mind doing meafavour?
T: That depends. What is it?
J: Well, I’m moving out, and I was wondering whether you could land mea hand with
some of the heavy furniture. I don’t think I can do it on my own.
T: Erm... I’d like to help but... erm, I've got plans on Saturday
J: But you owe me!
J: l helped paint your living room! Remember?
T: That was 15 years ago! And you were just talking while l did most of the painting.
J: That'; not how I remember it. But anyway, if you help me, I promise I'll pay you back. Please...
T: Erm... you knowalot about cars, don't you?
T: Well, you scratch my hack, and I'll Scratch yours. . . If you fix my car, I’ll help you move.
T: As soon as possible.
J: Erm... you know I’d love to. But I've got this terrible pain in my back. l can hardly stand up.[He holds his back and makesapained expression with his face.]
T: Well, OK. I’ll help you move flat on one condition. That you promise to fix my car when your back is better. And clean it as well.
J: I promise! Thank you so much! [He stands up and gives herabig hug. You're an absolute lifesaver.
T: Hang on! I thought your back was so sore you couldn’t stand up.
J: Erm. . .
T: You've been faking!
J: Erm. .. No, it’s just that it’s suddenly feeling better.
T: Oh, well, then how about fixing and cleaning my car? Five pm today good for you?
Move out ဟာ phrasal verb ပါ။ အိမ်ပြောင်းရွှေ့တယ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
to lend someoneahand ဟာအကူအညီပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းပါ။
you scratch my back: အပြည့်အစုံကတော့ "if you scratch my back, and I‘ll scratch yours”
ပါ။ တိုက်ရိုက်ပြန်ရရင် “ငါ့ကျောကုန်းကိုကုတ်ပေးရင်းငါလည်းမင်းကျောကုန်းကိုကုတ်ပေးမယ်”တဲ့။ ငါ့ကိုကူညီရင်ငါကလည်းပြန်ကူညီမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။
to fake: ဟန်ဆောင်နေတယ်။
Asking forafavour (အကူအညီတောငျးခံခွငျး)
အကူအညီတဈခုခု၊ အခှငျ့အရေးတဈခုခုကိုတောငျးဆိုတာကို ask forafavour လို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ ကိုယျကအကူအညီတောငျးရတဲ့အခါရှိသလို ကိုယျ့ကိုအကူအညီတောငျးလာတာလညျးကွုံရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့အရေးကွုံလာရငျနားလညျအောငျ၊ ပွောနိုငျအောငျ လလေ့ာကွညျ့ကွပါဦး။ (မွနျမာလိုပွနျရာမှာ အမြားစုကို သာမာနျအရပျသုံးစကားနဲ့ပွနျထားပါတယျ။)
. . . မြားကြှနျတျော့ကိုလုပျပေးနိုငျမလားမသိဘူးနျော
. . . လုပျပေးနိုငျမလားမသိဘူးနျော
• Have you got time to..? . . . ဖို့အခြိနျရလားဟငျ
• If it's not too much trouble, could you...? အပနျးသိပျမကွီးဘူးဆိုရငျ . . . ပေးနိုငျမလား
Preparing to ask forafavour (အကူအညီတောငျးဖို့ပွငျဆငျခွငျး)
ကိုယျကအကူအညီတောငျးရာမှာကိုယျလိုခငျြတာကိုခညျြးတနျးပွောလို့မဖွဈပါဘူး။ သူ့အခွအေနကေို တီးခေါကျကွညျ့ရပွီးမှ ပွောရတာဖွဈလို့ စကားပုလ်လငျခံရပါသေးတယျ။ တဈခြို့အသုံးတှဟော ရငျးနှီးတဲ့သူငယျခငျြးမြားကွားပွောကွတာဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျ၊ အမရေိကနျတှရေဲ့ဓလစေ့ရိုကျဖွဈလို့ ဗမာ့နားမှာတဈမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။
သောကွာနမှေ့ာအားလားဟငျ။ ငါ . . . လုပျဖို့တဈယောကျယောကျလိုနလေို့။
ဒီတဈပတျအလုပျမြားလားဟငျ။ ဒီပရောဂကျြကိုပွီးအောငျလုပျရမှာ။ ငါ . . . လိုနလေို့။
ဒီတဈပတျအိမျပွောငျးရမယျ။ မငျး ကူညီပေးနိုငျမလားမသိပါဘူး။
မငျးတုနျးကငါ . . . လုပျပေးဖူးတယျလေ။ အခု မငျး . . . လုပျပေးနိုငျမလား။
ဒါတော့ကြှနျတျောသိပျမကြှမျးဘူး။ ခငျဗြား . . . နိုငျမလား။
ခငျဗြားကားအကွောငျးတျောတျောသိတယျမဟုတျလား။ . . . နိုငျမလား။
ဒါတော့ခငျဗြားပိုငျပါတယျ။ . . . မလား။
ကြှနျတျော . . . လုပျပေးဖူးတာမှတျမိတယျမလား။
ဒါကနညျးနညျးတော့ ရငျ့သလိုမြားဖွဈနမေလားပဲ။ ဒါပမေယျ့ . . . နိုငျမလား။
(cheeky ကို ရိုငျးပသြော၊ ရငျ့သီးသော၊ မလေးမခနျ့နိုငျသော စတဲ့အဓိပ်ပါယျတှနေဲ့သုံးပါတယျ။ ဗမာဆနျဆနျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ထကျအသကျ၊ ရာထူး၊ ကွီးသူတှကေို တဈခုခုလုပျပေးဖို့ပွောရာမှာ “မရိုမသေ ကြှနျတျော့ကို စာအုပျလေးလှမျးပေးပါဦး” “ကနျတော့နျော။ စာအုပျလေးတဈခကျြလောကျ . . .” ဆိုတဲ့ပုံစံမြိုးလို့ယူဆပါတယျ။)
မငျးကသနျတာပဲကှာ။ ဒါလေးတော့ . . . နိုငျမလား။
Thanking someone (ကြေးဇူးတငျခွငျး)
အကူအညီရသှားရငျ တဈဖကျသားကိုကြေးဇူးတငျစကားပွနျပွောရပါမယျ။ ကိုယျ့ဘကျကလညျးပွနျပွီးအတုံ့အလှညျ့ ကူညီနိုငျမညျ့စကားပွောပေးရပါမယျ။
• Thank you so much. ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။
• You've saved my life. မငျးကယျပလေို့သာပေါ့။ (တကယျတမျးအသကျကယျတာနဲ့ဆိုငျခငျြမှ ဆိုငျပါလိမျ့မယျ။ အခွအေနအေပျေါမူတညျးပွီး ပိုပိုသာသာပွောတာဖွဈပါတယျ။)
•Thanksamillion. ကြေးဇူးကမ်ဘာပါ။
• You'reatrue friend. မငျးကတော့တကယျ့သူငယျခငျြးစဈစဈပဲ။
• I really owe you (one). မငျးအပျေါငါကြေးဇူးကွှေးတငျသှားပွီ။
• I'll buy youadrink sometime. တခြိနျခြိနျပွနျတိုကျမယျ။
• I'll return the favour sometime. ငါနောကျကပြွနျကူညီပေးပါ့မယျ။
• I'll do the same for you one day. တဈနတေ့ော့ မငျးကို ငါဒီလိုပွနျကူညီပေးပါ့မယျ။
• You're an absolute life saver! မငျးကတော့လုံးဝကယျတငျရှငျပါပဲ။
Agreeing to do someoneafavour (ကူညီဖို့သဘောတူခွငျး)
• OK. No problem. ရပါတယျ ကိစ်စမရှိပါဘူး။
• Yes, I could help with that. အငျး ကူညီနိုငျပါတယျ။
• Of course! ဒါပေါ့။ ရတာပေါ့။
• It would beapleasure. ဝမျးမွောကျဝမျးသာပါပဲ။
Saying no (ဟငျ့အငျးပွောခွငျး)
ကိုယျကမကူညီနိုငျတဲ့ကိစ်စမြိုးကတြော့လညျး ယဉျယဉျကြေးကြေးငွငျးတတျရပါမယျ။ ဆငျခွလေေးတှနေဲ့ပေါ့ . . .။
• Actually, I'mabit busy this week. တကယျတော့ ဒီတဈပတျနညျးနညျးအလုပျမြားနလေို့ပါ။
• I'm afraid I’ve got to go toawedding. အားနာပါတယျ။ မင်ျဂလာဆောငျတဈခုသှားရမှာမို့ပါ။
• I'm sorry but I can't because... ဝမျးနညျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မ . . . နိုငျပါဘူး။
• I'm not available on Wednesday. ဗုဒ်ဓဟူးနမေ့အားဘူးဗြ။
• No, I don't think so. ဟငျ့အငျး။ ငါတော့မထငျဘူး။
• I'd like to be able to help you but. .. ကူညီခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ . . .
• When was the last time you ever did anything for me? မငျးဘယျတုနျးကငါ့ကိုမြားတဈခုခုလုပျပေးခဲ့ဖူးလို့လဲ။
• No way! လုံးဝဘဲ
အောကျက dialogue လေးနဲ့တှဲလလေ့ာကွညျ့ပါဦး။
Move out ဟာ phrasal verb ပါ။ အိမျပွောငျးရှတေ့ယျလို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။
to lend someoneahand ဟာအကူအညီပေးတယျလို့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးပါ။
you scratch my back: အပွညျ့အစုံကတော့ "if you scratch my back, and I‘ll scratch yours”
ပါ။ တိုကျရိုကျပွနျရရငျ “ငါ့ကြောကုနျးကိုကုတျပေးရငျးငါလညျးမငျးကြောကုနျးကိုကုတျပေးမယျ”တဲ့။ ငါ့ကိုကူညီရငျငါကလညျးပွနျကူညီမယျလို့ဆိုလိုပါတယျ။
to fake: ဟနျဆောငျနတေယျ။
Permalink Reply by UMyo Min on December 29, 2012 at 14:14
Permalink Reply by Cherry Than on December 29, 2012 at 14:33
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on December 29, 2012 at 15:51
Permalink Reply by dawn dawn on December 29, 2012 at 15:55
Permalink Reply by thinnthinnhtay on December 29, 2012 at 17:19
Permalink Reply by 2l8u39i2vj7jf on December 29, 2012 at 18:54
Thanks for your lessons ^_^
Permalink Reply by Wint War War Htun on December 29, 2012 at 20:20
Permalink Reply by Hla Hla Win on December 29, 2012 at 22:13
Permalink Reply by Shwe Sin on December 29, 2012 at 22:51
Permalink Reply by cho mi linn on December 30, 2012 at 9:23
Permalink Reply by padout,layy on December 30, 2012 at 10:35
thank.... sayar zar ne.....
Permalink Reply by khinkhinchooo on December 31, 2012 at 13:24